Touchscreen lalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Ny fahafahana tsy manam-paharoa hilalao ny lalao an-tserasera Touch, fitantanana ny zava-nitranga tamin'ny nikasika zavatra teo amin'ny efijery mba hifindra, fa afaka ihany koa izy ireo miasa amin'ny ny totozy, fa noho izy ireo idirana ny rehetra. Ho hitanao ao amin'ny toerana tena foto-kevitra lojika sokajy: baolina, nihazakazaka ny bibilava, TIC tac rantsan-tongony, mazes. Mandehana any amin'ny Super Mario ao amin'ny manaraka fampielezan-kevitra tao an-trano-maizina, hilalao amin'ny toeram-piompiana sy nitifitra lasibatra. Ankizivavy miandry ny make-up, fandrahoan-tsakafo, lamaody, fikarakarana ny biby fiompy. Ho nihaona mahafinaritra ombimanga, nidobodoboka be ny milina ny ady Knights, mampihomehy baolina kitra, fanjonoana, habakabaka traikefa nahafinaritra sy ny maro hafa.
Lalao Efijery kasihina tamin'ny Category:
Farany Touchscreen lalao
Lalao Online Rehetra Touchscreen lalao an-tserasera
Touch lalao aminareo foana
Computer kilalao Mandroso miaraka amin'ny teknika, ary raha nisy touchmonitors (solosaina, finday, takela-bato), satria avy hatrany nanjary vavahadin lalao. Ny hatsaran-tarehiny milaza izy ireo hitantanana, dia ny totozy, mba hiditra any amin'ny fizarana, mifidy ny foto-kevitra sy ny tetika.
Koa satria izany no mahafinaritra tselatra tsotra, dia tonga lafatra ho an'ny toe-javatra rehetra, indrindra fa hanampy avy rehefa namorona ny fotoana malalaka, ary dia ilaina ny manao zavatra mahafinaritra. Gameplay dia tsotra, fa mampidi-doza, ary na dia ny anti-panahy faly taranaka hampiasa azy ireo ho fialam-boly.
Firy ny tsirony, ka be dia
Hahasarika mikasika efijery lalao mahatonga ny fahazoana sy ny fahasamihafana. Miaraka amin'ny fironana rehetra izao dia namorona kilalao be dia be ho an'ny ankizy ny sokajin-taona rehetra, ary koa ny tantara ny ankizivavy sy ny ankizilahy.
Kazhdy zavatra dia ahitana sampana.
Cards (sarintany, thimbles, roulette, slot milina)
Ohatra, raha toa ka mikasika lamaody maimaim-poana lalao, dia mitambatra Dress, mpanao volo, manicure, endrika fikarakarana. Ao amin'ny lalao fanatanjahan-tena ianao, dia hahita baolina kitra, fifaninanana, Golf sy ny toerana hafa. Card Solitaire lalao sy fahafinaretana – malaza eo amin'ny taranaka samihafa, ka dia jerena matetika indrindra. Azo antoka fa ao amin'ny fitaovana elektronika, izay mampiasa foana, misy iray, fara fahakeliny dikan- ny lalao sy ny karatra.
kilalao iray hafa izay tsy ambany noho ny Gamble sy ny tombontsoan'ny tandindomin-doza dia ny baolina. Mandroaka ny toerana ao ny endriky ny bibilava, fa tsy mamela hanafina ao amin'ny lavaka, na hanangona azy avy any amin'ny fitambaran'ny zavatra telo. Izany no tena fikatsahana tombontsoa sy ny hevitra, ary ny ambony ny ambaratonga dia misokatra, vao mainka sarotra sy mahaliana dingana.
sariitatra sary hita be taona mpilalao dia tsara, ary izy kafanam-po tao amin'ny toeram-piompiana nilalao sombin, namboly ahitra ho an'ny miraoka ahitra akoho, manangona atody, miambina ny akohovavy avy amin'ny biby mpiremby, tsy fahombiazana rafitra sy ny trano misokatra ho amin'ny sakafo. Mahaliana mijery sy safidy ho amin'ny fikarohana. Ny endriky ny mijery mahafinaritra, ary afaka mandany ora nirenireny alalan'izy ireo, maka ny baiko zavatra toy ny tena asa fa tsy mahatsiaro ho reraka.
Labyrinths Pacman araka ny karazany na ny Bomberman efa lasa aza prettier, sy ny mpilalao tia hilalao lalao maimaim-poana ireo sensor. Noho izany dia afaka handeha hiaraka ny jiolahin-tsambo harena, mandositra avy amin'ny biby goavam-be, ary handringana azy ireo araka izay azo atao. Raha toa ka tsy miresaka momba ny Classics ny lalao toerana, dia ilaina ny mitadidy ny tafika an-dranomasina sy ny ady amin'ny noughts lakroa. Izy ireo dia voaravaka amin'ny fomba samy hafa ary afaka misafidy eo amin'ny tarehy am-boalohany, ny lokony sy ny boky, na, toy ny tamin'ny raharaha ny ranomasina ady, sarina tena sambo.
rehetra ny tsara indrindra ho an'ny ankizy vavahadin lalao maimaim-poana
Touch lalao ho an'ny ankizy dia natao mba hanana amin'ny alalan'ny fanomezana vaovao. Ao amin'ny tontolo virtoaly dia ny foto-kevitra:
Eto lafiny rehetra, fa ny dikany dia mazava. Koa ny ankizy hampivelatra fahaiza-manao ny tanana maotera raha miara-miasa amin'ny sensorial lalao, fanehoan-kevitra sy ny fandinihana. Amin'ny maha- asa, dia afaka mitady ny fahasamihafana eo amin'ny sary; mahita ny mpivady ny karatra, fantatra ihany koa ho fahatsiarovana karatra; hampifandray ny teboka tsipika; hizara ny zavatra eo amin'ny sela, mandinika ny contours.
Zazalahy amin'ny fialam-boly mahaliana milina, ary afaka mandamina ny firazanana, na maka kely podkachivaya reraka fikatsahana azy, tucking lasantsy amin'ny alalan'ny nanasa ny vovoka nitsinjaka mikasika lalao an-tserasera. Girls fashionista dia ho afaka ny akanjo ny tarehin-tsoratra na ny biby, handamina ny fanaka tao amin'ny efitrano, angòny ny sakafo vilia, mahazo ny milina basy sy ny kilalao eny amin'ny lanitra mba hisambotra baolina miloko.